Ahoana ny fanavaozana ny Huawei P8 Lite ho an'ny Android M ofisialy | Androidsis
Raha efa roa volana teo ho eo izay no nampianariko anao manavao ny Huawei P8 Lite amin'ny Android M amin'ny fampiasana beta ofisialy tafaporitsaka, androany tonga ny fotoana havaozina izany amin'ny fomba ofisialy amin'ny tsimbadika farany an'ny Android 6.0 na Android M ofisialy.
Ao amin'ny horonan-tsary mifatotra amin'ilay lohatenin'ity lahatsoratra ity na tutorial azo ampiharina dia asehoko anao ireo fomba roa havaozina Huawei P8 Lite ho Android M ofisialy manomboka amin'ny kinova beta izay nampianariko anao hametraka fotoana lasa izay. Amin'ity lesona an-tsary ity ihany dia asehoko anao ny fomba roa azontsika ampiasaina amin'ny fanavaozana ofisialy ny Android M, ny voalohany dia amin'ny alalàn'ny OTA ho an'izay tsy mandefa ny fampandrenesana ny Android vaovao misy, ary ny faharoa, amin'ny alàlan'ny fampidinana ny firmware farany ofisialy farany feno. Ankoatry ny, Ity tutorial azo ampiharina ity dia manan-kery ho an'ny maodely Huawei P8 Lite rehetra, maodely DualSIM na maodely ALE21.
1 Fepetra ilaina hihaonana mba hanavaozana ny Huawei P8 Lite ho an'ny Android M ofisialy
2 Ny rakitra ilaina amin'ny fanavaozana ny Huawei P8 Lite mankany Android M amin'ny tanana
3 Lahatsary fanavaozana amin'ny tanana minitra 9:21
Fepetra ilaina hihaonana mba hanavaozana ny Huawei P8 Lite ho an'ny Android M ofisialy
Ho an'ny fizotran'ny fanavaozana amin'ny alàlan'ny OTA dia tsy mila mahafeno karazana fepetra hafa ankoatra ny fahazoana ny fampandrenesana mifanentana amin'ny kinova Android misy vaovao. Ho an'izay tsy nahatratra ny fampandrenesana tamin'ny alàlan'ny OTA ary te-hanavao ny Huawei P8 Lite ho an'ny Android M ofisialy, dia izany Izay te hanaraka ny tutorial momba ny fanavaozana azy amin'ny tanana, ity dia tsy maintsy mahafeno ireto fepetra manaraka ireto:
Manana a Huawei P8 Lite DualSIM modely ALE21.
Raha nanavao ny Android M beta tamin'ny alàlan'ny lesona nampianariko anao ianao taloha, tutorial ityAzonao atao koa ny manavao azy amin'ny fomba asehoko anao anio, na amin'ny alàlan'ny OTA raha tsy nahatratra ilay fampandrenesana na tamin'ny tanana ianao raha mbola tsy diso ilay fampandrenesana voalaza etsy ambony momba ny Android vaovao misy.
Raha mbola tsy eo amin'ny Android M ianao fa ny fampifangaroanao dia mifanaraka amin'ny iray amin'ireto manaraka ireto dia azonao atao koa ny manaraka an'ity fampianarana ity hanavao ny Huawei P8 Lite anao amin'ny Android M: ALE-L21C432B524 - ALE-L21C432B194 - ALE-L21C432B188 - ALE-L21C432B170 - ALE-L21C432B010
Asao 100 x 100 ny batterie.
Raha misy fanavaozana amin'ny alàlan'ny OTA, mifandraisa amin'ny tamba-jotra Wifi.
Raha misy fanavaozana amin'ny tanana, manana a MicroSD farafaharatsiny farafaharatsiny 4Gb.
Ny rakitra ilaina amin'ny fanavaozana ny Huawei P8 Lite mankany Android M amin'ny tanana
Raha mbola tsy nahazo ny fampandrenesana OTA ianao ary ny tadiavinao dia ny manavao azy amin'ny tanana. tsy maintsy mampidina an'ity rakitra ZIP ity ianao, esory izy ary adika ny fampirimana fampidinana ao amin'ny fakan'ny karatra fahatsiarovana MicroSD.
Aorian'izany dia mila miditra ao amin'ny Dialer an'ny Huawei P8 Lite ianao ary manisy marika ity kaody ity:
Hahazo menio serivisy izay tsy maintsy alehanao mifidy safidy isa 4 ary manamafy amin'ny bokotra OK. Avy eo ny terminal dia hahita ny fanavaozana ofisialy ny Android M izay adika ao anatin'ny fampirimana dload ao amin'ny faka-microSD, hanomboka indray izy io ary hanomboka ny fizotran'ny fanavaozana ny Huawei P8 Lite ho an'ny Android M ofisialy.
Avy eo avelako aminao ilay horonan-tsary amin'ny minitra manokana anazavako ny fomba havaozy Huawei P8 Lite ho Android M ofisialy amin'ny tanana. (min 9:21)
Lahatsary fanavaozana amin'ny tanana minitra 9:21
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ahoana ny fanavaozana ny Huawei P8 Lite ho an'ny Android M ofisialy
Benny teran mena dia hoy izy:
Ary avy eo ahoana ny fanavaozana ireo maodely ALE-L23 ???
Valiny tamin'i Benny Teran Mena
ALFREDO VERASTEGUI dia hoy izy:
RAHA IZAO NO VOAROTA IHANY NO ANANAO FA NY OLANAO TSY MISY FOTOTRA VITANA NA INONA NA IZA
Valio amin'i ALFREDO VERASTEGUI
Juan Solo dia hoy izy:
ary raha ny maodeliko dia ALE-L23?
Mamaly an'i Juan Solo
My.model dia Ale L23, ahoana no fanavaozana azy?
Valio amin'i LUIS MIGUEL
Jose Botello dia hoy izy:
Jereo aho manavao azy amin'ny kinova ho an'ny L21 manao toy izany koa dia ho hitanao
Valiny tamin'i Jose Botello
Yury alexander hernandez dia hoy izy:
miarahaba ahy manana an'ity kinova ity ALE-L23C605B140
mbola tsy tonga aty amiko ny via OTA
inona no tokony hataoko
Valiny tamin'i Yury Alexander Hernandez
Mbola tsy voavaly ny fanontanianay momba ny fanavaozana ny fanampiana p8lite Ale -23 momba an'io lohahevitra Azafady mba ho Android 6.0
erick aguilera dia hoy izy:
Huawei P8 Lite firmware ALE-L23c605b140 ho an'ity modely ity izay tokony hataoko hanavao ny android 6.0 sy ny emui 4.0
Valio i erick aguilera
Mba hanavaozana ale-l23c636b150, inona ny dingana tsy maintsy harahiko, nanandrana fisie maro aho tamin'ny pejy huawei, saingy samy nanome ahy hadisoana daholo izy ireo raha vao nanomboka.
Izaho inona dia hoy izy:
Hitako ny fanavaozana an'io maodely io ao amin'ny pejin'ny huawei colombia fa mazava ny fampidinana fampidinana android 6.0 emui 4.1
Mamaly an'i jaco
Izaho dia mitovy amin'ireo te-hanavao ny ALE-L23C60B140 anao ary hijery raha mandeha tsara amiko ny onjam-peo ... satria miasa mandritra ny roa minitra aorian'izany dia mihantona ary mila manomboka indray aho mba hahafahako manohy mihaino ... ity dia ho antsipirihany avy aminao .. ATTE George faly
Mampalahelo fa tsy nisy valiny Nalefany fotsiny ilay video ho an'ny maodely teo aloha ary izahay eto nefa tsy nahazo valiny momba ny fanavaozana ny rafitra fiasa ho 6.0
carlos bolaños izarra dia hoy izy:
Azoko tsara fa mbola tsy misy fanavaozana ny h, ale-l23, tsy maintsy miandry isika
Mamaly an'i carlos bolaños izarra
TE HANTATRAO RAHA MBOLA MISAOTRA NY fanavaozana ho an'ny L23
Ny fanontaniana rehetra dia ampahafantaro ahy satria avy any Mexico aho ary nanana an'io olana io, efa fantatr'izy ireo ny bootloader tsy namoha, tsy misy root ary misintona ireo rakitra voalaza etsy aloha ary amin'ny dingana ataovy izay hahatonga ny flash amin'ny alàlan'ny fanatanterahana ilay rakitra amin'ny solosaina ary any ianao dia ho l21 aorian'ny famoahana ny rakitra steep2 dia esorin'izy ireo avy ao amin'ny folder mandra-pahatongan'ny fanavaozana.zip dia milanja mieritreritra aho fa kely kely ny 20k amin'ny fanesoranao ny baloong ary voila dia lasa ALE-L21 ary ampandehanana ny fiasa sim indroa izay mandeha ao amin'ny sd slot use hand sim dia hatsarana efa L21 AZONAO azafady manaraka ny dingana voalaza etoana mankany Android 6
benjamin an'i tugal dia hoy izy:
Jorge, mety ho somary antsipiriany bebe kokoa ve ianao hahafahana manatanteraka ny fomba? Manana ale 23 tb aho, ary avy any Peroa aho
Mamaly an'i benjamin ho an'ny tugal
Bro alel23 aho tsy tadidiko ny compilation fa navaoziko tamin'ny fijerena vidéo ary lasa 6.0 aho izao nefa nilaza izy ireo fa nilaza tamiko izy ireo fa mampiasa batterie bebe kokoa ilay kinova ary raha hitako fa lany vetivety ny fanontaniako dia ny fomba ahatongavako ho ofisialy manomboka amin'ny kolam, tsy manana faka aho ary tsy manana ny botloader voahidy
namako aiza no ahafahako misintona an'io zip-steep2 io
Sosa dia hoy izy:
Ny L23 dia efa miseho ho ALE-L21C432B17 ary misintona ny fanavaozana ny android 6 fa ny telefaona tsy manome famantarana ahy. Misy olona afaka manampy ahy?
Mamaly an'i Sosa
Laura C dia hoy izy:
Salama, manana olana aho amin'ny fanavaozana 6.0 amin'ny huawei p8 lite ALE-L21. Manomboka manavao izy io ary rehefa mahatratra 7% dia lazainy amiko fa misy ny tsy fahombiazana ary miverina indray izy io. Mety ho ilay B194 ilay kinovolo ananako? Na dia mifanaraka amin'ny boky torolàlana aza dia mifanaraka. Inona no azoko atao?
Valiny tamin'i Laura. C
Leticia R. dia hoy izy:
Ny ahy dia nohavaozina, ho hitantsika ny toetrany ao anatin'ny andro vitsivitsy, tamin'ny fomba nivarotako azy tamin'ny telcel avy any Mexico, dia ALE-L23
Valiny tamin'i Leticia R.
Carlos Garcia dia hoy izy:
Leti, inona ny kinova manavao anao? inona ny isa manangana? Avy any Mexico ihany koa aho ary tsy misy na!
Valiny tamin'i Carlos Garcia
Norma Leticia Rivero Valentin dia hoy izy:
Salama, havaozy ny B550, manaraka ny rohy ato amin'ity lahatsoratra ity, saingy tsy tokony hamporisihinao hanavao azy ianao, roa andro taty aoriana dia nanana olana aho, mangatsiaka (mainty) ny lamba. Nidina nidina tany lollipop indray aho (B046 heveriko) ary nohavaozina ho lasa B170 aza fa ny sela kosa mijanona ho iray ihany, tsy maintsy averiko indray matetika na soratana tsy hidina ny efijery satria tsy miverina manome sary intsony, Heveriko fa iray amin'ireo sensor io.
Valiny tamin'i Norma Leticia Rivero Valentin
bj obando dia hoy izy:
Salama, manao ahoana ianao? Manana huawei ALE-L23 compilation ALE-L23C605B150 aho ary mbola tsy nahazo fanavaozana.
Mamaly an'i bj obando
Manana huawei p8 lite aho fa ny maodely famolavolana ale-l23
Fomba aiza no fumniate na tsia?
Mamaly an'i gerson
Fampisehoana Luver dia hoy izy:
tolak'andro tsara dia misy fanontaniana miasa miaraka amin'ny kinova p8 lite ALE21 ALE-L21C432B204 ???? Manana fisalasalana aho, satria tsy hita ao anaty lisitra io ary tsy tiako ho simbaina ny findaiko
Valio ny zava-bitan'i Luver
Maria Jose dia hoy izy:
Salama, ho an'ny ALE-L21 C178B120, hisy fanavaozana ve?
Mamaly an'i maria jose
Salama Maria, tiako ho fantatra raha azonao atao ny manavao ny b120 ary ahoana no nanaovanao izany satria tsy afaka niaraka tamin'ny botloader aho, azafady 🙁
Maurizio dia hoy izy:
Salama, manana ny firmwre B508 aho. Ahoana no ahafahako mampihetsika ny sim faharoa ary manana ny kinova ofisialy Huawei?
Valiny tamin'i Maurizio
Huawei Honor 5C dia ofisialy amin'ny alàlan'ny chip Kirin 650 sy ny efijery Full HD 5,2-inch
Nanjavona tao amin'ny fivarotana Google ny Nexus 9